ယနေ.န.အ.ဖ ဘိုချုပ် များနဲ. ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဘာကွာသလဲဆိုတာ ဒီပုံလေးကသက်သေခံနေပါတယ်။
ကျနော် ဖတ်မိမှတ်မိသလောက်ဆိုရင်ဒီပုံထဲက ကုတ်အင်္ကျီဟာ မြန်မာနိုင်ငံအတွက်အရေးဆိုဖို.အင်္ဂလန်အသွား အိန္ဒိယမှာနားစဉ် သာမာန်စစ်ဝတ်စစ်စားနဲ.ရောက်လာတဲ.ဗိုလ်ချုပ် ကို အဲ.ဒီအချိန်က အိန္ဒိယနိုင်ငံ ရဲ.ခေါင်းဆောင်ကြီးနေရှုးက
ဒီလို ၀တ်စုံနဲ. အင်္ဂလန်ရဲ.အအေးဒါဏ် ခံနိုင် မှာမဟုတ်ဘူးဆို ပြီးလက်ဆောင်အဖြစ်ချုပ်ပေးလိုက်တဲ.သမိုင်းဝင်ကုတ်အင်္ကျီပါ....။
ရိုးသားလွန်းတဲ.ဗိုလ်ချုပ် ၊ပကာသန မမက်တဲ.ဗိုလ်ချုပ်ကို ယနေ. န.အ. ဖ ဘိုချုပ်တွေအတုယူနိုင်ဘို.(မထင်ပါခင်ဗျာ ကျွဲပါး DJ ပွတ်တာက မှ ကျွဲတွေနားလည်အုံးမယ်) ဗိုလ်ချုပ်မွေးနေ.အမှတ်တရ အဖြစ်ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်....။
Posted by phone myint at 7:55 PM